मूल्य रु. ४१,५९० निर्धारण
सेल्फी एक्स्पर्ट एण्ड लिडर, ओपोले वैश्विक स्तरमै निकै लोकप्रियता कमाएको स्मार्टफोन ओपो एफनाइन अन्तर्गत नयाँ लिमिटेड एडिशन सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्लो वर्ष सनराइज रेड, ट्वाइलाइट ब्ल्यू र स्टारी पर्पल गरी तीन भिन्न रंगमा सार्वजनिक ओपो एफनाइनका लागि प्राप्त अभुतपूर्व सफलतापश्चात कम्पनीले नयाँ रंग जेड ग्रिनमा लिमिटेड एडिसनका रुपमा फोन सार्वजनिक गरेको हो । एफनाइन जेड ग्रिन एडिसनको मूल्य रु. ४१,५९० निर्धारण गरिएको छ ।
‘एफनाइनका लागि प्राप्त माया र सहयोगका लागि हामी समस्त उपभोक्ताप्रति कृतज्ञ छौँ । एफनाइनले नेपाली बजारमा निकै ठुलो सफलता हात पारेको छ । हामीले जेड ग्रिन लिमिटेड एडिसनको डिजाइन विशेषगरी यूवा पुस्तालाई ध्यानमा राखि गरेका छौँ । हामी यूवा पुस्तासँग स्मार्टफोनको माध्यमबाट सम्बन्ध स्थापित गर्छौँ । तसर्थ डिजाइन हाम्रालागि निकै महत्वको विषय हो’, ओपो नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बबी ट्राओले भने, ‘ओपोमा हामी हाम्रा उपभोक्ताहरुका लागि नवप्रवर्तनात्मक प्रविधि कायम राख्दै छनोटका विभिन्न विकल्प उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ । हालसम्म प्राविधिक उत्कृष्टता कायम राख्दै सुन्दर कलात्मक उत्पादन दिने कार्यमा हामी सफल रहँदै आइरहेका छौँ । यसैको एक सटिक नमुनाका रुपमा एफनाइन जेड ग्रिन एडिसनलाई लिन सकिन्छ । ’
जेड ग्रिन एडिसनमा एफनाइनमा विद्यमान विशेषताहरू (स्पेसिफिकेसन्स)लाई नै निरन्तर्ता दिइएको छ । यसमा उपलब्ध भोक फ्ल्याश चार्जले ५ मिनेटको चार्जमा २ घण्टा टक टाइमको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । प्रयोगकर्ताद्वारा गरिएका प्रयोग तथा परीक्षणमा भोक फ्ल्याश चार्जले, मात्र ५ मिनेटको चार्जमा सर्वाधिक लामो टकटाइम दिने प्रमाणित भइसकेको छ ।
सार्वजनिक नयाँ एफनाइन जेड ग्रिनले पनि यो अनुभवलाई निरन्तर्ता दिनेछ तर, नयाँ लुक्समा । जेड ग्रिन भ्यारियण्टले ह्वाइट स्याण्ड बीचेज, सफा पानी र लश रेनफोरेस्ट रंगको सम्मिश्रण मार्फत प्राकृतिक पारदर्शि लुक्स प्रदान गरिएको छ ।